Faahfaahin ka soo baxaysa masuuliyiin xaley lagu laayey magaalada Laacaanood – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa masuuliyiin xaley lagu laayey magaalada Laacaanood
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya dilkii xaley magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool loogu geystey masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolkaasi ee hoos taga Somaliland.
Ku simihii gudoomiyaha maxkamada gobolka Sool Sheekh Maxamed Ibraahin Samatar oo la aaminsan yahay in uu ahaa bartilmaameedka weerarka ayaa geeriyoodey waxaana sidoo kale isla weerarkaasi ku geeriyoodey kalkaaliye caafimaad oo lagu magacaabi jirey Cadaani Sulub.
Labada nin ee la dilay waxay ka soo baxayeen masjid xili ay salaada maqrib ay ku tukumadeen waxaana dilkooda dad goob joogayaal ahi ay sheegeen inay geysteen koox wajiga dabooshay oo ku hubaysnaa baastoolado, iyagoo marxuuminta la dilay ay isla goobtii ku geeriyoodeen.
Kusimaha gudoomiyaha maxkamada gobolka Sool ee la diley, waxaa xilkan uu sii hayey tan iyo markii sidan oo kale loogu diley magalada Laascaanood gudoomiyihii hore Sabeeen dheere oo kooxo hubaysan 18-kii bishii July ay dileen.
Kusimihii Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Sool ee maamulka la baxaya Somaliland ayaa koox hubaysani Rasaas kula beegsadeen badhtamaha magaaladda Laascaanood.
Weerarkan oo lala beegsaday Garsoore Sare Sheekh Maxamed Ibraahin Samatar ahaana hada kusimaha Gudoomiyaha Maxkamada Gobolka Sool waqti uu ka soo baxay salaadda maqrib.
Taliska booliiska gobolka Sool ee Somailnd ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan dilalkan xaley ka dhacay magaalada Laascaanood, waxaana dilkan uu ku soo beegmay iyadoo madax ka tirsan maamulka Somaliland ay ku sugan yihiin magaalada Laacaanood kuwaasi oo uu hogaaminayo Axmed Cabdi Xaabade oo ah wasiir ka tirsan maamulka Somaliland, sidoo kale dilku wuxuu ku soo aaday xili si weyn loo adkeeyey amaanka magaalada Laacaanood maadama manta ay ku began tahay 18-ka May oo ah maalintii gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ay ku dhawaaqeen inay ka go’een Soomaaliya inteeda kale.
Marxuumintii xaley la dilay ayaa saaka lagu aasayaa qabuuraha magaalada Laacaanood, iyaodo aanay jirin ilaa iyo hada cid loo soo qabtey dilkan.